Faransaayi seera godaantotaa walfalmisiisaa raggaasifte - BBC News Afaan Oromoo
Faransaayi seera godaantotaa walfalmisiisaa raggaasifte
Goodayyaa suuraa Sagaleen kenname Paartii Pirezidaant Imaanu'eel Maakroon bakka lamatti kan hire ture.
Manni marii Faransaayi seera koolu galtummaa daran kan dhiphisu seera godaantummaa haaraa fi cimaa ta'e raggaasise.
Seerri kun yeroo iyyannaa koolu galtummaa akka gabaabbatu godhus, yeroo godaantonni seearaan ala jedhaman irratti hidhaa taasifamu ammoo dachaa gochuunsaa beekameera. Namni seeraan ala gara Faransaayi gale hidhaa waggaa tokkoon akka irratti murtaa'u ragga'e.
Akka paartiin Pirezidaanti Imaanu'eel Maakroon jedhetti, seerri haaraan kun sirna iyyannaa koolu galtummaa kan saffisiisuudha.
Haa ta'u malee mormitoonnii fi mirga namaaf kan falman tarkaanfiin kun hammaan olitti kan hammaateedha jedhu.
Seerri kunis sagalee deggersaa caalmaa 228 argachuun, 139 mormanii 24 ammoo sagalee laachuu dhiisuun kan ragga'eedha.
Miseensa paartii Pirezidaanti Maakroon kan ta'e Jiin-Mikaa'eel Kleement, sagalee mormii kan laate wayita ta'u miseenssonni biroon 14 ammoo sagalee kennuurraa of qusataniiru.
Yeroo iyyannaa koolu- galtummaa gad xiqqeessuu ilaalchisee seerri kun ''Irra caalaa kan hubu koolu-galtoota midhamatti saxilamoo ta'aniidhaa, isaantu guyyaa gabaabaa murteeffame keessatti qaqqabu dadhabu mala,'' jechuun Dhaabbanni Mirga namoomaa Quuqamu (Humaan Right Watchi) dubbateera.
''Sirna hojii koolu-galtummaa haala fooyya'aa ta'een raawwachuuf gargaara maqaa jedhuun seerri tumame kun, tarkaanfiilee hamoo fi eegumsa nageenya koolu galtootaa kan daran gad xiqqeessuudha,'' jechuun Faransaayitti gartuu Mirga namoomaa kanaaf daayirkteera kan ta'an Bebedikt Jiineerood ibsa isaani keessatti dubbataniiru.
Seeri haaraan raggasifame kunis ji'a Waxabajjii keessa falmiin akka irratti godhamuuf Seeneetiitti ni dhihaata.